Rakibaadda ATR 42 / 72 for P3D xoog si loo tirtiro FSX-Maalin-gelinta?
Rakibaadda ATR 42 / 72 for P3D xoog si loo tirtiro FSX-Maalin-gelinta? 1 sano 5 bilood ka hor #1351
Waxaan isku dayay inaan rakibo ATR 42 / 72 for P3D4, laakiin bilowga waxaa la i weydiistay inaan dib-u-rakibo waxa aan leeyahay FSX- iyo FSX: SE ATR's (eeg shaashadda ku lifaaqan sawirka).
Inkasta oo dhammaantood ay ku jiraan qaybo kala duwan.
Si kastaba ha noqotee, waxaan rabaa inaan sii hayo FSX-Itilmaamid - sidaas ayaan dib u dhigay P3D4-Rakibaadda.
Ma jiraa qof haysta xalka dhibaatada? Mise waa FSX-Birada dib ayaa loo rakibay kadib markii (si ku meel gaar ah) loo tirtiray, oo ay weheliso the P3D4-Rakibaadda?
Rakibaadda ATR 42 / 72 for P3D xoog si loo tirtiro FSX-Maalin-gelinta? 1 sano 5 bilood ka hor #1356
Waxa aan sameeyo waxay kaydisaa faylasha atr ee feylka diyaaradda oo ay kujiraan darbiyada iyo dhawaaqa iyo saameynta feylasha ee galka koobiga ee meel kale oo aad pc ama waddo adag oo dibedda ah markaa barnaamijka ha tirtiri faylasha oo ha u ogolaado inuu ku rakibo waxaa laga yaabaa inuu geliyo feylasha dib fsx iyo mid uumi ah haddii aadan koobi oo dhajin faylasha aad ku kaydsanayd ee aad ku kaydsan lahayd fsx iyo uumi iyo dhamaantood meeshii ayey ku soo noqon doonaan si fudud. Way ka fududdahay in la celiyo dhammaan feylashaas kor ku xusan intii aad isku deyi lahayd inaad soo saarto kuwa iska leh atr ps markii ay ku weydiisatay inaad ku qorto feylasha waxaad dhahdaa haa dhamaantiin dhib kama gaarin ciyaarta.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.320